Shina nandoko vy sary sokitra Art Gallery Landscape Art Metal Artwork Square Decoration orinasa sy mpanamboatra | Piedra
Havitrana sary hosodoko sary hosodoko sary hosodoko Fanaovan-tsangantsangana Fototry ny sary
Modely Tsia: MES08
Ho taitra ve ianao amin'ilay sary sokitra mahavariana ity? Vita tamin'ny vy vita amin'ny vy izay azo apetraka ho haingon-trano. Izy io dia sary sokitra haingon-trano mahavariana alokaloka. Azoko antoka fa ho afa-po an'io asa tanana metaly io ianao.Nahoana no tsy hifandray aminay haingana araka izay azo atao?
Anaran'ny vokatra Painted Metal Sculpture Zavakanto Fampandrosoana ny Tanàn-kanto Fototry ny sary kanto Art
Spec / Size ODM / OEM
Isa isa MES08
surface Lasan-tanana sy polished
Package Fonosana poavatra
Application Haingo ivelany
Firenena mpanondrana America, Europe, Indonesia, Singapore, Malaysia ary ny sisa
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. Izay hita ao amin'ny tanànan'i Xiamen, Faritanin'i Fujian, China.Nanao sary sokitra sy tsangambato maro izahay nandritra ny 10 taona mahery. Ny sary sokitra ataontsika dia misy lohahevitra lehibe any ivelany, lohahevitra momba ny zaridaina, lohahevitra fampiroboroboana ara-barotra, lohahevitra momba ny trano fandraisam-bahiny, lohahevitra hitoerana, lohahevitra fampisehoana, lohahevitra mpanakanto sns.
Izahay dia manao azy io amin'ny alàlan'ny fiarovana sy fanovozan-kevitra amin'ny tontolo iainana vy, varahina, materialy fiberglass. Tsara ho an'ny haingo ivelany sy anatiny. Noho izany dia be mpampiasa amin'ny vokatray izy io.
Taorian'ny fampandrosoana nandritra ny taona maro, manana ekipa matihanina miaraka amina ampahany amin'ny famolavolana, tsipika famokarana, olona mpivarotra, inspecta kalitao izahay. Azontsika atao ny manolotra ny famolavolana CAD araky ny takian'ny mpanjifa. Ny mpanjifanay dia avy any Etazonia, Eoropa, Israel, Norvezy, Indonesia ary ny sisa.
Previous: Sary sokitra vita amin'ny metaly vita amin'ny metaly «Lawn Art Vase»
Manaraka: Sary sokitra vita amin'ny zaridaina alaina ivelan'ny metaly metaly tsy vita amin'ny vy
Recycle Metal Yard Art Sculptures metaly ivelany ...
Ny sary sokitra vita amin'ny metaly kanto maha-olombelona miaraka amin'ny karatra ...
Sary sokitra vita amin'ny metaly Abstract misy loko volamena ...